Layaab - Wiilkan Thailand-deska wuxuu guursaday gacalisadiisa oo meed ah (Daawo Video) - iftineducation.com
Kamsook iyo Chadil
iftineducaion.com – Kamsook iyo Chadil waxey jecel isla wadeen mudo 10 sano ah dhoormarna waxey qorsheynaayeen iney isnikaaxsadaan, qorshahooda dhoor mar ayuu dib u dhacay mashquulka oo badnaa iyo Chadil oo rabtay iney dhameysato Jaamacadeeda awgeed. Kamsook marabo qorshahiisa inow dib u dhaco, waxow ku qasbanaaday inoow nikaaxsado gacalisadiisa Chadil oo meed ah.
Jaceylkooda heerko gaarsiisanyahay awgeed dimasho xita weykala geyn weysay lamaanahaan, tana waxaa cadeeyay sarinya Samsook oo kasoo jeeda Thailand oo guursaday gacalisadiisa oo geeriyooday maalin kahor nikaaxa.
Kamsook ayaa aad ugu naxay kadib markii gacalisadiisa Chadil Deffy shil gashay maalmo kahor qorshaha nikaaxooda.
Gabadhaan oo 28 sano jir ah side aheyd in la badbaadiyo laakin qolada isbitaalka waxey codsadeen iney sugto 6 saacadood, cudurdaar qolalka isbitaalka oo buuxo awgeed isbitaalkalana loolama cararin.
Chadil ugu danbeyntii waxay heshay daaweyn, laakiin nasiib daro daawaca oo cabaar laga aamusay awgeed ayaa sababay iney u dhimato, malin kahor qorshaha nikaxooda, Chadil na sidi ayey ku geeriyootay.
Kamsook iyo Chadil waxey jecel isla wadeen mudo 10 sano ah dhoormarna waxey qorsheynaayeen iney isnikaaxsadaan, qorshahooda dhoor mar ayuu dib u dhacay mashquulka oo badnaa iyo Chadil oo rabtay iney dhameysao Jaamacadeeda awgeed.
Marabo qorshahiisa inow dib u dhaco, waxow ku qasbanaaday inoow nikaaxsado gacalisadiisa Chadil oo meed ah.
Kamsook waxoow ku nikaaxsaday diinta budhada meedka Chadil 4 january ee lasoo dhaafaayay, sida lagu daabacay Odity Central, xaflada nikaaxaan ayaa sitoos ugu socotay Surin, Waqooyga Thailand, intey socotay xaflada Kamsook waxaa ka muuqday murugo aan caadi aheyn sidaas oo kale dadka kasoo qeeb galay.
Qof isticmaala Facebook ayaa waxow u sameeyay Fanpage oo ku qoranyahay qisadooda, Fanpage-kaas waxaa illaa hadda like dhahay 30.000 oo qof. (Aden yo)
Halkaan Kadaawo Video-ga:
W/Q: Aden yo